जापानमा बजेका १०८ घण्टहरु र हाम्रा १०८ कमी कमजोरी : “जोया नो काने” « LiveMandu
जापानमा बजेका १०८ घण्टहरु र हाम्रा १०८ कमी कमजोरी : “जोया नो काने”
१८ पुष २०७७, शनिबार १९:५१
एशियाली देशहरुमा १०८ घण्ट या १०८ धाराहरु र १०८ भजन तथा मन्त्रहरुको ठूलो महत्व छ । नेपालमा शुभ तथा वैदिक कार्यहरुमा १०८ पटक अंकको धार्मिक, सांस्कृतिक विश्वास तथा प्राचिन मान्यता हामीले सुन्दै बुझ्दै अनि देख्दै आएका हौं । १०८ धारामा नुहाउनुको फल, १०८ दिनको जाप, १०८ मन्त्रोच्चारण, १०८ परिक्रमा लगायत अन्य धेरै विश्वासहरु रहेको छ ।
सुर्योदयको देशको उपनामले विश्व प्रविधि जगतमा परिचित देश जापानमा नयाँ वर्षको दिन गएर मन्दिर या गुम्बाहरुमा १०८ पटक घण्ट बजाउने चलन सदियौंदेखि चलिआएको छ छ । यस वर्ष अर्थात् सन् २०२१ को जनवरी १ मा छापिएको जापान टाइम्सको ताजा संस्करणले “नयाँ वर्षमा मन्दिरमा गएर १०८ घण्ट बजाउनु भयो?” (Happy New Year! Did you visitatemple (or shrine) on the first of January, and ring the bell 108 times, per Japanese tradition?) भनी लेख नै प्रकाशित गरेको थियो ।
१०८ पटकले १०८ बोनो अर्थात मान्छेका १०८ कमजोरीहरुलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ । महत्वाकांक्षा, नास्तिकता, परस्त्रीगमन, जुवा, रिस, राग, हेपाई, निराशावाद, घोचपेच, कम आत्मविश्वास, द्वेश, पीडा, ईष्र्या, झुठ, नकारात्मकता लगायत अन्य धेरै भावनाहरु र सोचहरुलाई १०८ कमजोरीमा जापानी रितले राखेको छ । जापानी रितका अनुसार एउटा पीडकले आफूले सँधै आफू पीडाको विरोधमा भएको र आफूजस्तो सज्जन कोही नभएको बिश्वास राख्दछ । तसर्थ आफ्ना कमजोरी पत्ता लगाउन सबैले पूनरावोलोकन गर्नै पर्दछ ।
यसरी १०८ पटक घण्ट बजाएपछि मानवले हरेक घण्टको पछाडिका कारणहरु र कमजोरीहरुलाई पुनरावलोकन गर्दै आफू स्वच्छ हुने प्रयास गर्नु पर्दछ भन्ने जापानी संस्कारमा उल्लेख छ ।
कोही पनि मान्छे यी १०८ कमजोरीबाट मुक्त त हुनै सक्दैन तर मान्छेको प्रयास भने सँधै यि कमजोरीबाट पर जान सक्नु हुनपर्ने कुरा बताइन्छ । जापानमा नयाँ वर्षका दिन हरेक मन्दिर र गुम्बाहरुमा १०८ घण्टहरुको अविछिन्न आवाजहरु गुञ्जीए । अन्य वर्षहरु भन्दा यस वर्ष त्यहाँ १०८ घण्टहरु बजाउन जाने मान्छेहरुको सँख्या बढि थियो, भौतिक दुरी कायम गर्दै घण्ट बजाएका मान्छेहरुका आँखामा जीवनका कमजोरी र पापाबाट मुक्ति पाउँदै स्वच्छताको आशा स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
‘जोया नो काने – Joya-no-Kane’ अर्थात् जापानी वाक्यांश जसको अर्थ हुन्छ “१०८ पटक घण्ट बजाउने”, यस वर्ष जापानी सामाजिक सञ्जाल र अधिकांश जनजीवनका बोलीचालीमा निकै सुनियो । जापानी बुद्धिज्मका अनुसार मान्छेहरु सबै भौतिक चाहहरुबाट तठस्त रहनुपर्दछ र यि १०८ घण्टमध्य १०७ घण्टले पुराना वर्षका चाहहरु लाई पर भगाएको हो र अन्तको एउटा घण्ट चाँही नयाँ वर्षका लागि हो । सनातन हिन्दु सभ्यतामा झैं त्यहाँ पनी घण्ट बजाउने मात्र नभई घण्ट श्रवण गर्ने सबैलाई समेत यस्को सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुन्छ । जापानका स्थानीय केहि शहरका मन्दिरहरुका घण्टहरु त यति ठूला छन् कि तिनलाई बजाउन पनि दर्जनौं मान्छेहरु वरिपरि बस्नुपर्ने हुन्छ ।
“जोया को काने”का बारेमा जापानी समाचार एजेन्सी क्योतो, जापान टाइम्स लगायत अन्य थुप्रै जापानी समाचार एजेन्सीहरुले लेखेका थिए ।
यसरी घण्ट बजाउन र आवाज सुन्न मन्दिर जानेहरुले मन्दिरको काठको बाकसमा ५ ऐनको सिक्का चढाउने चलन हुन्छ जस्लाई साइसेन भनिन्छ । यसरी सिक्का चढाउन अघि सिक्कालाई हावामा उछालेर दुई पटक ताली बजाउने र मन्दिर भित्र हेर्ने चलन छ । यसो गर्दा सम्बन्धमा राम्रो हुने र सकारात्मक समय (Good Luck – गुड लक) आउने मान्यता छ ।
जापानका घण्टहरुले विश्वबन्धुत्व र विश्वशान्तिको पैरवी गरुन, नयाँ वर्षको शुभकामना !
तस्वीरहरुः जापानी युवाहरुको सामाजिक सञ्जाल
#joya no kane
#जोया नो काने